saqafka adag qolof teendhada
Noocee ah teendhada dusha sare ee ugu raaxada badan?
Gawaarida gaarka loo leeyahay ayaa si tartiib tartiib ah caan uga ah dalka. Shucuurta dadka Shiinaha ee safarka is-wadista ah ayaa sii kululaanaya sanadba sanadka ka dambeeya. Dad badan oo jecel xiisaha safarka waxay jecel yihiin inay raacaan meelahaas aan la geli karin waxayna ku faraxsan yihiin inay ku raaxaystaan ​​farxadda kaamaynta bannaanka. Si kastaba ha noqotee, socdaalka dibedda ee hadda socdaa waa ...
Tilmaamaha ugu fiican ee teendhada lagu dhex seexdo?
Teendhadu waa gurigeenna loogu talagalay u guurista dibadda. Tayada teendhada ayaa go'aamisa amniga iyo raaxada hurdadayada ee jawiyada banaanka. Sidaa darteed, waxaa muhiim kuu ah inaad jaangoyso dhismaha teendhada! Muddo dheer, asxaabta qaar si buuxda uma aysan fahmin xirfadaha dhismaha teendhada, ...
Intee ayuu le'eg yahay gaariga aad rabto inaad ku rakibto teendhada saqafka?
Ilaa iyo inta ay nabdoon tahay in la rakibo, waa dookhaaga shakhsi ahaaneed cabbirka la rakibayo. Shirkadeena sidoo kale waxay leedahay Teendhada ugu sarreysa Shiinaha ee iibka ah, soo dhawow inaad la tashato. Markii ay kor u kacday iyo horumarka isboortiga dibedda ee dal iyo dibadba, dadku kuma cusba erayga kaambayn. Dad badan ayaa u isticmaala kaamamka sidii fa ...
Sidee loo doortaa xero si ay kuugu seexdaan muuqaalka saxda ah?
Maadaama aad Tahay Bixiyaha Teendhada Sare, la wadaag adiga. Iyada oo leh dhul baaxad leh iyo muuqaal qurxoon, Xinjiang waxaa loo yaqaan "janada isboortiga bannaanka". Qiyaas inaad raadineyso meel qabow oo nadiif ah kuleylka xagaaga kulul. Teendhada xir, fur bacda jiifka, xiddigaha hoostoodana, maxaa qirasho ah ...
Sooc Alaabada SWAG !!!
Muhiim! Si loo helo isku xirnaan nabdoon oo habboon, isticmaal, iyo daryeel akhris iyo raac dhammaan tilmaamaha. Qof kasta oo isticmaala teendhadan waa inuu marka hore akhriyaa buugan. Astaamaha Gaarka ah pocket Jeebka yar ee keydka lagu keydiyo ee dhinaca geeska. Meel fiican oo lagu keydiyo furayaasha ama toosh yar. ...
Taariikhda teendhooyinka dusha sare
Saqafka Sare Tentalso wuxuu leeyahay xilli “guri” saqafka ah, wuxuu leeyahay taariikh shan ama lix sano ah warshadaha ku hareeraysan oo lala soo saaray warshadaha wax soo saarka baabuurta. Kordhinta lahaanshaha baabuurta ee Shiinaha, dalxiiska is-wadista ayaa si tartiib tartiib ah u kululaaneysa, iyo Saqafka Si ...
Maxay yihiin qalabka qolofta teendhada saqafku?
Xerada Arcadia & Dibadda Products Co., Ltd. waa mid ka mid ah soosaarayaasha waxsoosaarka dibedda ee 20 sano khibrad u leh berrinka, oo ku takhasusay naqshadaynta, soo saarista iyo iibinta alaabada daboolaya teendhooyinka jiifka, teendhooyinka saqafka sare, teendhooyinka kaamamka, boorsooyinka dhabarka, bacda jiifka , derin iyo h ...
Faahfaahinta SWAG iyo adeegsigeeda!
Teendhada Hal Swag waa fududahay in la helo, maaddaama lagu furi karo dhererkeeda oo dhan. Tani waxay ku siinaysaa fursad aad ku seexdaan xiddigaha hoostooda, iyadoo weli laga ilaaliyo cayayaanka dhibsada gidaarka mesh. Sidaa awgeed, teendhadaadu had iyo jeer way fiicnaan doontaa oo way qabownaan doontaa, xitaa inta lagu jiro maalinta kuleylka kulul. Waa ugu dambeyntii ...
Sidee loo doortaa shiraac gawaarida dibadda ah?
Gawaarida gawaarida waa inay fududaan tahay rakibideeda, fududahay furitaankeeda iyo laab laabkeedaba, ku haboon safarka, xulashada ugufiican ee walxaha aluminiumka ah, maro shiraac ah. Baabuurka Side Aishing, waa habka ugu fiican ee lagu dhammaystiro kaamkaaga; hoy siiya roobka ama qorraxda. Qalabkan qalabka ayaa si wanaagsan loo dhisay, oo kaliya ...
Teendhada dawanka albaabka shiraac ee loo yaqaan 'Arcadia double door'
Teendhada dawanka dawanka albaabka loo yaqaan 'Arcadia double door canvas' waxaa lagu dhisay lakab dhulka ka samaysan oo biyuhu diidan yihiin iyo suuf sare oo biyo u adkaysta, omly one pole oo ku yaal bartamaha. Vetilation wuxuu ka yimaadaa albaabka shaashadda hore ee gebi ahaanba la xiro iyo sidoo kale 4 daaqadaha shaashadda ee dariska ah oo la xiro. Waxay qaadataa laba qof qiyaastii 10 m ...
Kaambeyn Lagu Waarayo Kaambada Dibedda ee loo yaqaan 'Double Canra Double Austrailian Swag Teent'
Teendhada Hal Swag waa fududahay in la helo, maaddaama lagu furi karo dhererkeeda oo dhan. Tani waxay ku siinaysaa fursad aad ku seexdaan xiddigaha hoostooda, iyadoo weli laga ilaaliyo cayayaanka dhibsada gidaarka mesh. Sidaa awgeed, teendhadaadu had iyo jeer way fiicnaan doontaa oo way qabownaan doontaa, xitaa inta lagu jiro maalin xagaa kulul. Waa kama dambaysta ...
Dibedda soojeedinta teendhada teendhada dibedda
Taambuugga sare ee Arcadia waa mid ka mid ah teendhooyinka cusub ee ugu adag ee leh iftiinka cirka ee suuqa, dadku waxay arki karaan muuqaalka darajada 360. Waxay kufiican tahay 4x4 isjiidooyin iyo riigag adag oo wadada ka baxsan. Miisaanka culus ee laba-xidhka ah ee dharka la isku tolay ee jidhka ugu muhiimsan waa halkii aan ka bilownay. Waxaan ku darnaa ...
Xerada Arcadia & Dibadda Products Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2005, taas oo ku takhasustay naqshadeynta iyo soo saarista Teendhooyinka Gawaarida, Teendhooyinka Saqafka, Shiraacyada ......